Maamulada Puntland iyo Jubbaland oo Shir uga furmay magaalada Boosaaso + (SAWIRRO) | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Maamulada Puntland iyo Jubbaland oo Shir uga furmay magaalada Boosaaso + (SAWIRRO)
Maamulada Puntland iyo Jubbaland oo Shir uga furmay magaalada Boosaaso + (SAWIRRO)
Boosaaso (Halqaran.com) – Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland, Mudane Siciid Cabdullaahi Deni ayaa ka qeybgalay Shirka Xukuumadaha Puntland iyo Jubbaland, oo shir uga socda xarunta madaxtooyada ee magaaladda Boosaaso.
Shirkan oo ku saabsan iskaashiga labada dhinac ee arrimaha amniga, ganacsiga iyo horumarka guud, ayaa sidoo kale waxaa looga hadlaya arrimaha Siyaasadda dalka, sida Doorashooyinka, dib u eegista Dastuurka, Shidaalka iyo deeqaha lagu helo magaca Soomaaliya.
Madaxweynaha Jubbaland ayaa Khamiistii gaaray Magaalada Boosaaso, halkaasi oo si wanaagsan loogu soo dhaweeyay.
Maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland ayaan xiriir wanaagsan la laheyn dowladda Federalka Soomaaliya, waana mida keentay shir iyaga u gaar ah inay ku yeeshaan Magaalada Boosaaso.
Puntland iyo Jubbaland oo Shir uga furmay magaalada Boosaaso